Tsy Mahasakana Ahy Tsy Ho Miozolomana Dokotera Ny Sisintany Sy Ny Fandrarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2017 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Español, عربي, 繁體中文, 简体中文, Français, Português, bahasa Indonesia, 日本語, English
Sary an-drindrin'i Banksy : Dokotera ‘Fo Milamina ‘ . San Francisco, Aprily 2010. Sary avy amin'ny mpisera Flickr Kanaka Rastamon. CC BY-NC 2.0
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 30 Janoary 2017 ity fanehoan-kevitra avy amin'i Jalal Baig ity, Ary naverina navoaka eto indray ho anisan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Global Voices sy ny PRI.
Tsy voafetran'ny sisintany na ny rindrina mihitsy ny fitsaboana. Ary tsy voafaritry ny volon-koditra na ny pasipaorony ny fahaizan'ny dokotera manasitrana .
Fa ankehitriny, mampiseho ny fandrahonana mbola tsy mbola fahita hatramin'izay ho an'ireo dokotera mpifindra monina sy ho an'ireo marary eto amin'ny firenentsika ary ny rafitra ara-pahasalamana ny baikon'ny Filoha Donald Trump mba handrarana ireo mpifindra monina avy amin'ny firenena fito izay manana Miozolomana maro an'isa. Mety hiteraka faharavana ny fisisihana sy ny fihitaran'izany.
Miaty 5 isanjato ny fitambaran'ny Miozolomana amin'ny dokotera eto Etazonia. Raha teraka avy any ivelany ny sasany amin'izany ary ny hafa kosa, toa ahy sy ny vadiko, dia zanakalahy sy zanakavavin'ny mpifindra monina. Avy any Pakistan ny ray aman-dreniko .
Misy 28 isanjato ny fitambaran'ny dokotera sy ny mpandidy mpifindra monina eto Amerika. Maro no tonga teto avy any amin'ny firenena tahaka an'i Meksika, Pakistan, Egypta, Iran sy Syria, mba hanatanteraka ny Fianianan'i Hippocrate .
Maro ny olana izay noresen'izy ireo tamin'ny fikarakarana ireo marary. Ankoatra ny fandaozana ny fianakaviana, nitsoaka zava-tsarotra na fanenjehana izy ireo indraindray. Nandany taona maro ireo olona ireo hahazoana alalana hanao fanadinana sy ho afaka hifaninana hahazo toeram-piasana avo lenta. 51,9 isanjato fotsiny tamin'ireo nahazo diplaoma ara-pitsaboana iraisampirenena no tena nahazo toerana tsara tamin'ny taona 2016.
Natosiky ny teny fampanantenana fisian'ny ainga mitovy ao Amerika sy ny faniriana tsy misy fitiavan-tena hanohana ny ain'ireo miaritra aretina fotsiny izy ireo na dia teo aza ny dingana feno fahasarotana sy ny tsy ampoizina.
Maro ireo dokotera ilaina hanome fitsaboana fototra any amin'ny faritra tsy ampy olona ary araka izay voavinavina dia hiakatra avo roa heny ny isan'ny olon-dehibe 65 taona na mihoatra amin'ny taona 2030 ka Ilaina indrindra ny fahaiza-manao sy ny fangoraham-pon'izy ireo hahamaro isa hatrany ny dokotera mpitsabo ao anatin'ny rafitra ara-pitsaboana ao amin'ny firenena. Hahazo tombontsoa avy amin'ny fahamaroan'ny dokotera sy ny karazan-talentany amin'ny fahafantarany ny filàny ara-kolontsaina sy fitenin'ny marary ihany koa ny fiofoan'ny mponina ao Etazonia.
Ankoatra izany, tsy afaka hivoatra tsy misy fandraisana anjara fikarohan'ny mpifindramonina ny fitsaboana. Mpifindra monina ny roa amby efapolo isanjaton'ny mpikaroka any amin'ny foibem-pikarohana fito lehibe indrindra momba ny homamiadana. Amin'ny maha manampahaizana manokana momba ny homamiadana ahy, mety hihena be ny ezaka ataoko hanasitranana ny homamiadan'ny marary raha tsy misy ny fanafody izay azo avy amin'ny fikirizana mafy ataon'izy ireo. Ary mpifindramonina avokoa ireo Amerikanina miisa enina nahazo ny loka Nobel taona 2016 tamin'ny siansa.
Tsy maintsy heverina daholo izany rehetra izany satria mety handratra ireo tonga any Etazonia tsy mitondra afatsy stethoscopes [fitaovana fitsapana fitempon'ny fo] miaraka aminy sy ny faniriany amin-kitsimpo mba hahita ny fiainana Amerikana miroborobo ny fandraràna diso làlana ataon'ny Filoha Trump ny fifindramonina.
Tsy misy ny mpampihorohoro eto fa ny maha-olombelona ihany no misy eto.
Dokotera mpitsabo ao Chicago sady mpikaroka ao amin'ny sampandraharahan'ny Aretin'ny Rà sy ny Homamiadana ao amin'ny Oniversiten'i Illinois, Hopitaly ao Chicago i Jalal Baig.